Akụkọ - costsbawanye ụgwọ na ezughi oke uru, ọnụahịa electrode eserese ka na-atụ anya ịrị elu.
Asingba ụba na-akwụ ụgwọ na ezughi oke uru, graphite electrode ahịa ka na-atụ anya ibili.
Nchịkọta ahịa: Graphite electrode ahịa ahịa nọgidere na-adị n'izu a. N’izu a, ọnụ ahịa sọksfrọl sọlfọ klọk n’ezighi ezi, ihe anaghị agwakọta nke grades nke graidụ, kwụsịrị ịda ma kwụsie ike. The ọjọọ mmetụta na akụrụngwa n'elu nke graphite electrodes ebelatawo, na nchere-na-ahụ àgwà nke graphite electrode ahịa belata dịtụ. N'okpuru nrụgide nke ọnụ ahịa dị elu nke agịga coke na coal pitch, nke bụ ngwaọrụ maka grades graid, ọtụtụ ụlọ ọrụ kọmpụta kọmpụta mara mma ejirila ihe ha kwuru. Tụkwasị na nke a, electrode graphite nke izu a na-agbanye ọkụ ọkụ eletrik ka na-ekwusi ike n'ọkwa dị elu, na graphite electrode kwesịrị ịkwado. Imirikiti ụlọ ọrụ na-ahụ maka kọmpụta kọọrọ na-ekwu na mbupu ụlọ ọrụ ahụ kwụsiri ike. Enwere ike ịhụ na grafụd electrode chọrọ nkwado n'akụkụ ka dị.
Tụkwasịnụ: Graphite electrode ahịa nọgidere na-enwe uko ọkọnọ n'izu a. Izu a, ọkọnọ nke ultra-elu-ike obere na ọkara-sized graphite electrodes na graphite electrode ahịa nọgidere na-uko. Isi ihe kpatara ya bụ na ụlọ ọrụ na-emepụta kọmpụta ndị ọzọ na-emepụta ike eletrik na nnukwu ibu. Obere na ọkara-sized graphite electrodes na akaụntụ maka a obere mmepụta òkè, na n'ihi na ala ala oriri, atọ ndị yiri nkata adịghị. Na-abawanye, na ọkọnọ nke obere na-ajụ-sized graphite electrodes ka bụ esika.
Chọọ n'akụkụ: The graphite electrode ahịa ina n'akụkụ nọgidere na-enwe a ọma n'ozuzu arụmọrụ a izu. Izu a, ọnụego ọrụ nke igwe ọkụ ọkụ ọkụ nke China nọgidere n'ọkwa dị elu. Site na nkwado nke ọchịchọ siri ike, mmetụta na ịzụta grad nke graid dị mma. Tụkwasị na nke a, dị ka nzaghachi sitere na ụlọ ọrụ electrode graphite, ọ bụ ezie na ọnụego ibu nke ụgbọ mmiri mbupụ ka dị na ọkwa dị elu n'oge na-adịbeghị anya, nnweta ngwa ngwa nke ụgbọ mmiri mbupụ adịla nwayọ, na arụmọrụ zuru oke nke grade electrode na-ebugharị.
Na usoro nke ụgwọ: Ọnụ ego nke electroite graphite egosipụtara mmụba na-aga n'ihu n'izu a. Ọnụ ego coke sọlfọ na-akwụsị ịda ma mee ka ọ kwụsie ike n’izu a, ọ dakwasịrị mmetụta na-adịghị mma na mbara ala gradite gradịt; ọnụ ahịa agịga agịga dị elu n'izu a, ọnụahịa kol na-aga n'ihu na-arị elu, ọnụ ahịa nke electrodes graphite ka na-arị elu.
Banyere uru: The n'ozuzu uru nke graphite electrode ahịa bụ ka ezughi oke n'izu a. The graphite electrode ahịa price e-agba ọsọ nwayọọ nwayọọ na-adịbeghị anya, na Roling abawanye na-eri ka na-compressing uru oke nke graphite electrode ahịa.
Na usoro nke atọ ndị yiri nkata: E nwere ihu ọma enweghị ngafe yiri nkata ìgwè ke graphite electrode ahịa n'izu a. Izu a, ọtụtụ graphite electrode ụlọ ọrụ nwere anụ mmepụta, na downstream ina graphite electrodes bụ naanị mụ, na e nweghị ìgwè nke ngafe yiri nkata na ahịa. Mainfọdụ ụlọ ọrụ na-ahụ maka kọmpụta kọmpụta mara ọkwa gosiri na ha ga-edobe akụkụ nke ngwa ahịa ntụgharị dị mma, ụfọdụ ụlọ ọrụ kọmpụta na ndị obere na ndị ọkara gosiri na ụlọ ọrụ ahụ enweghị ngwongwo.
Amụma Outlook: Ego nke graphite electrode ahịa na-adịgide elu n'izu a, ọnụahịa nke sọlfọ sọlfọ mmanụ coke kwụsiri ike, ọnụ ahịa nke graphite nkwado electrode ga-abawanye. Na steeti na mkpokọta uru nke graphite electrode ahịa ka na-ezughi oke, ọnụahịa nke ụlọ ahịa elekọtara eserese ka nwere ohere ịkwanye, a na-atụ anya ịbawanye site na 1,000 yuan / ton.
Post oge: Jun-08-2021